Saddex sano ka dib xiritaanka KickAss Torrents, wareejinta aasaasaheeda ayaa ah mid taagan - Tech - Numerama - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Saddex sano ka dib xiritaanka KickAss Torrents, wareejinta aasaasaheeda waa mid taagan - Tech - Numerama
Saddex sano ka dib xiritaanka KickAss Torrents, wareejinta aasaasaheeda waa la joojiyay - Tech - Numerama
Xirmay 2016, bogga KickAss Torrents ayaa tan iyo markaas loo beddelay saacado badan. Marka loo eego aasaasaheeda, waa in loo dhiibaa Mareykanka. Laakiin feylku horey uma socdo.
Kim Dotcom ma ahan qofka kaliya ee halista ugu jira in loo musaafuriyo Mareykanka dacwadda sharci darrada ah. Halka aasaasihii MegaUpload dadaal kasta samee muddo toddobo sano ah si looga fogaado inay ka baxaan waddanka New Zealand, waxaa jira eedaysane kale oo sidoo kale si xoog ah loogu diri karo dhinaca kale ee Atlanta. Laakiin sida Kim Dotcom, faylka ayaa baaray.
Mareykanka ayaa sidoo kale bartilmaameedsanaya wareejinta hantida la sheegay ee KickAss Torrents. // Xigasho: Steve Harwood
Waxay ka badan tahay laba sano tan iyo markii maxkamadda Polish ay qaadatay ansixiyay marka hore wareejinta Mareykanka ee Artem Vaulin Yukreeniyaan. Laakiin tan iyo bishii Maarso 2017, waxba ma dhicin. Tan waxaa xaqiijisay kooxda sharciga ee mas'uul ka ah difaaca qofka ay qusayso asxaabteena gudaha TorrentFreak. Ma jiraan talaabooyin muhiim ah oo la qaaday. Warbixin uu soo saaray dacwad oogaha Mareykanka ayaa xaqiijinaya curyaaminta kiiska.
Si kastaba ha noqotee, waxyaabo ayaa dhaqaaqi kara ugu dambeyn Oktoobar. Dhageysiga heerka kiiska ayaa loo qorsheeyay deyrtan. Markii hore waxaa loo qorsheeyay inay dhacdo badhtamaha Luulyo, laakiin waa la beddelay. Looma reebin, waliba, in dib loo dhigo taariikh dambe. Dhanka kale, Artem Vaulin ayaa dammaanad lagu hayaa iyadoo la sugayo dhacdooyinka kale.
Clones waxay la wareegeen sharaftii hore ee P2P
Guud ahaan xeebaha Atlanta, Artem Vaulin waxaa loo arkaa inay tahay sharaf cirfiirkii hore ee KickAss Torrents boggooda sharci darrada ah, kuwaas oo howlihi si arxan dara ah ayaa loo joojiyay xagaaga 2016. Waqtigaas, Mareykanku wuxuu ku eedeeyay qalabkan inuu yahay " goobta ugu badan ee booqatay faylalka wadaagista ". Goobta waxaa bil kasta booqda 50 milyan oo soo booqdeyaal ah, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta.
Dabeecad xun oo faaruq ah ayaa ku hartay, luminta KickAss Torrents ayaa kacday si taxane ah oo isku xiga ku soo celinta si ka badan ama ka yar oo aamin ah magaca barta (cinwaannada asalka ah ayaa la galay, mar dambe suurtagal ma ahan in la isticmaalo) iyo qaabeyntiisa. Weli maanta, qaar badan oo ka mid ah ku xigeenadaas waa shaqeynayaan oo u oggolaanaya inay soo dejistaan ​​shaqooyinka sharci darrada ah, iyagoo u maraya hab-raaca BitTorrent.
Faylasha waxaa lagala soo xiriiray macmiil la jaan qaada hab maamuuska BitTorrent.
KickAss Torrents wuxuu ku dhashay 2008 wuxuuna u soo ifbaxay mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee xiriiriyeyaasha BitTorrent. Aqoonsiga kama dambaysta ah, sida loo hadlo, magaciisa waxaa lagu muujiyey liiska madow oo ka mid ah goobaha ugu xun ee sharci darrada ah kuwaas oo ay dejisay MPAA iyo RIAA, laba urur oo Mareykan ah oo u xilsaaran difaaca danaha istuudiyaha filimada iyo sumadaha muusikada.
Ka hor hawlgalka oo soo afjaraya howlihiisii, oo si farsamo ahaan u riixay isticmaaleyaasha meel kale, KickAss Torrents ayaa mararka qaar la kulmay hoos u dhigida natiijooyinkeeda Google et shaandhaynta wadayaasha - marka caddaaladda ayaa amar ku haysay in la sameeyo. Taas darteed, KickAss Torrents ayaa mar marka qaarkood cusbooneysiisay magacii domain waxayna sameysay isbedelo farsamo oo kala duwan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/539825-trois-ans-apres-la-fermeture-de-kickass-torrents-lextradition-de-son-fondateur-est-au-point-mort.html?utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=539825
"Tirada deriska" waa jahwareerka ugu dambeeya ee internetka
Spliiit: maxaad halis ugu tahay inaad la wadaagto xisaabaadkaaga Netflix, Spotify ama Amazon Prime ee boggan? - Tech - Numerama
Xhaka mord à Evra
Dadka: Kanye West iyo Kim Kardashian waxay cusbooneysiiyaan nidarradooda guurka
Paltalk Truy Tìm Sự Thật: Li Tuyên Truyền Của TT Trump vs Joe Biden vs Hunter Biden - VIDEO
Pakgne Xilliga 3 Episode 6 - Muranka Biyaha - HALKAN HOOSE KA DHAGEYSO
Guinea: Doorashadii baarlamaaneed ee dib loo dhigay Sine dhinto - JeuneAfrique.com
Cameroon - Job Offers278
DADKA & LIFESTYLE6,388
TECH & TELECOM2,438
Video dheeraad ah2,790